Taratasim-pifandraisana RV: Mizara loharanon-kolontsaina sy teknolojia maimaimpoana ho an’ireo vondrompiarahamonina ny Milpa Digital · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-pifandraisana RV: Mizara loharanon-kolontsaina sy teknolojia maimaimpoana ho an'ireo vondrompiarahamonina ny Milpa Digital
Voadika ny 24 Novambra 2019 15:04 GMT
Sary famantarana ny vondrona Milpa Digital nampiasaina teo ambany fahazoandalana CC BY-SA 4.0.
Manondro endrika ifarimbonana amin'ny fambolena izay hita taratra tany amin'ny taonjato maro lasa teo anivon'ireo Vahoaka Mesoamerikana ny “Milpa“. Tsy mijanona amin'ny famokarana vokatra irery ihany ity fomba ity fa filozofia izay ahazoan'ny fiarahamonina iray manontolo tombontsoa.
Ao anatin'izany toetsaina izany ihany no hitadiavan'ilay fitaovana vaovao antsoina hoe “Milpa Digital” izay noforonin'ny vondrona Código Sur “hamboly voa izay afaka hanampy hamokatra Mesoamerika iray malalaka ara-teknolojika ary beazin'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ireo hetsi-bahoaka”.
Tafiditra anatin'ireo lohahevitra rakofan'ireo fitaovana ireo ny fampiasàna ireo tolotra imailaka hafa, ny fiarovana fototra ireo finday, ary ireo fomba fanaovana soramiafina fototra.
Afaka sintonina, amboarina ary ampiasaina malalaka eo ambanin'ny fahazoandalana CC BY-SA 4.0 ireo fitaovana rehetra ireo.
Ho an'ity andiany ity, tianay ny hanolotra anareo mpampiantrano roa vao hangaina ilay tetikasanay miodina ao amin'ny Twitter mikasika ny fikatrohana ara-niomerika amin'ny teny Afrikana (@DigiAfricanLang). Te hisaotra an'i Andriamifidisoa Ny Haja Zo izahay tamin'ny nizaràny ny asany mikasika ny teny Malagasy ary koa i Mazhun Idris tamin'ny asany mikasika ny teny Hausa. Mba vakio ireo lahatsoratra Fanontaniana&Valiny(F&V) hahafantaranao bebe kokoa ny momba azy ireo sy ny asany!
Ao anatin'ity andiany ity ihany koa, te hampahafantatra anao mpitantana vahiny iray nitantana ny @ActLenguas tato ho ato izahay – mpikatroka ho an'ny tenin-janatany iray avy ao Amerika Latina: i Rony Arnoldo Otzoy Chipix [es] (ny teny Kaqchikel an'ny Maya, ampiasaina ao Goatemalà Afovoany). Ao anatin'ity lahatsoratra mirakitra ny mombamomba azy, hahafantatra bebe kokoa mikasika azy sy ny asany amin'ny famelomana indray/fampiroboroboana ireo tenin-dreniny ianao.
Ary raha toa ka manitikitika anao ny fomba anampian'ny Aterineto sy ny teknolojia ireo ezaka famelomana indray ireo teny Amerikana Zanatany sy ny an'ireo Firenena Voalohany, tokony hijery ireo zavatra lazain'ireo mpitantana vao haingana ny @NativeLangsTech mikasika ny asany amin'ny fikatrohana ara-niomerika ho an'ireny teny ireny ianao. Atolotray ho anao ny lahatsoratra F&V miaraka aminà mpitantana vao haingana, i Niigaatikwe (Jordyn Flaada) (ho an'ny teny Ojibwe ampiasaina any amin'ny faritry ny Farihy Lehibe ao Kanadà sy ao Etazonia)
Nanomboka tamin'ny volana Aogositra, nanatevin-daharana ny fankalazàna ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-janatany (#IYIL2019) ihany koa ireo mpikatroka ara-niomerika ho an'ny tenin-janatany Aziatika. Raha toa ka te hahalala bebe kokoa mikasika ny toeran'ny tenin-janatany manerana an'i Azia amin'izao fotoana ianao, araho ny hetsipanentananay farany miodina ao amin'ny Twitter @AsiaLangsOnline ary vakio ireo lahatsoratra mirakitra ny mombamomba an'ireo mpampiantrano farany, dia i Sanjib Chaudhary (Tharu Atsinanana, Nepal) ary koa i Mingma Phuti Sherpa sy i Pasang Yangjee Sherpa (Sherpa avy any amin'ny Himalaya).
Ho fanampin'ny fikatrohana ara-niomerika ho an'ny tenin-janatany, te hanasongadina ny ezaka iray nataon'ireo Tanzaniana mpanavao ara-teknolojika izahay tamin'ny fanatsarany ny kalitaon'ny fanabeazana tao amin'ny firenena. → “Mampifandray mpampianatra 5.000 amin'ny mpianatra maro amin'ny sehatra vaovao anaty aterineto ireo mpanavao ara-teknolojika any Tanzania“
Mpikambana, na fikambanana avy amin'ireo vondrompiarahamonin'ireo Firenena Voalohany ao Kolombia-Britanika na Kanadà ve ianao? Efa mandray fisoratana anarana ilay Hetsika Santatra vaovao Fanampiana amin'ny Famadihana ho Niomerika (DiGI) izay natao mba hanohanana ny famadihana ireo loharano amin'ny tenin-janatany ho niomerika. Raha te hitahiry tsara kokoa ireo rakitra an-tsoratra mba hampiasana any aoriana ianao, manasa anao hitsidika ity pejy ity ahitanao ny antsipiriany sy torolalana bebe kokoa. Daty farany fisoratana anarana: 30 Septambra 2019.
Araka ilay efa nozaraina tanatin'ny andiany farany teo, hatao any Hawaii amin'ity volana Novambra ity ny Fihaonana An-tampony ho an'ny Fifandraisan'ny Zanatany. Satria moa betsaka ny zavatra tsy maintsy resahina anatin'ny fotoana voafetra mandritra io hetsika io, nikarakara andianà fotoam-piofanana virtoaly roa mba hampandraisana anjara bebe kokoa ireo mpanatrika mialohan'ilay hetsika ny Internet Society. Manasa anao hijery eto ahitanao ireo antsipiriany sy fanazavàna fanampiny mikasika ny fisoratana anarana.
ny maripankasitrahana Puffin / Type ho an'ny Olompirenena Tia Mamorona, tetikasa iray iraisan'ny Puffin Foundation Ltd. sy ny Type Media Center, dia maripankasitrahana atolotra isan-taona natao ho fampaherezana ireo misitraka izany mba hanohy ireo ezaka ataony ankehitriny sy hanetsika ireo hafa hanohitra ny toejavamisy tsy miova amin'ny fombany manokana. Jereo eto ny anaran’ireo nahazo ny maripankasitrahana tany aloha sy ireo torolalana amin'ireo fanendrena .
Mitady fitaovana hanampy anao handamina ireo boky henoina amin'ny tenin-janatany Amerikanina Avaratra ve ianao? Ito ary. Tena tsara fanahy be i David Huggins-Daines nizara ity tao amin'ny Twitter. Fanamarihana: Omena anao maimaimpoana ambanin'ny fahazoandalana MIT © David Daines, Patrick Littell, Aidan Pine ity rindrambaiko ity. (antsipirian'ilay fahazoandalana)
Tsy nahatratra ilay Zaikabeny momba ny Aterineto tao Stockholm tamin'ity Mey 2019 ity ve ianao ary te hanenjika ? Rohy mankany amin'ireo fandraketana ilay hetsika: Andro 1 sy Andro 2. [H/T – Taratasim-pifandraisan'ny Tambajotran'ny Vondrompiarahamonin'ny APC]
VAKITENY, FIHAINOANA ary FIJERENA FANAMPINY
Mampiasa Twitter mba hamelomana indray ny teny Munsee ny mpampianatra iray, hita ao amin'ny London Free Press
Anatinà Anjerimanontolo Zanatany iray: Dian'ny Pamusepia hita ao amin'ny Gazetiboky Langscape (Terralingua)
Mitrandraka ny herin'ireo tambajotra sosialy mba hampianarana ny teny fampiasa ao an-toerana amin'ny alalan'ny CBC ny Yukon First Nation
Ny fahatsapako ho tsy atao an-kilabao – Datu Amay atolotry ny Voice Talks amin'ny alalan'ny SoundCloud
Bulos, Ilay teniko, Lovantsika atolotry ny Voice Talks amin'ny alalan'ny SoundCloud
Ahoana no ataonao mba handraketana ny tantara am-bava an'ny zanatany amin'ny fomba mivelatra nefa am-panajàna ny fitsipiky ny vondrompiarahamonina? natolotry'i Subhashish Panigrahi tamin'ny Wikimania 2019
Ulukhaktok: Fampifandraisana Vondrompiarahamonina any amin'ny (Farany) Avaratra hita ao amin'ny Internet Society